တင်ဆက်သူ၏၀န်ခံချက် | မ၀င်းမေ(နေမျိုး)
This entry was posted on April 16, 2011, 4:04 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
#1 by Craton on April 16, 2011 - 4:15 pm
#2 by Lanolay on April 17, 2011 - 2:53 am
အေးဗျာ ခင်ဗျားတင်မှပဲ ကျနော်တို့လဲ ဖတ်ရတော့တယ် ကျေးပါ
#3 by manorhary on April 19, 2011 - 4:35 am
အစ်မ မဝင်းမေ နဲ့ ကိုနေမျိုး ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်တုန်းကတည်းက မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ မေမေနဲ့ တစ်ခေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ချင်တယ်လို့ သားကလေးက ပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့။
သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အစ်မ မဝင်းမေ ကောင်းရာသုကတိလားပါစေ ..
#4 by ရင်မင်း on April 19, 2011 - 3:49 pm
ကျေးဇူးဘဲ ။ သင်္ကြန်မပြီးခင်ထဲကညွှန်းထားလို့စိတ်ဝင်စားနေတာ..ခုတော့ဖတ်ဖြစ်သွားပြီး… တစ်ရှုးးတလိပ်ကုန်သွားတယ်…….
#5 byူလွင် on June 11, 2011 - 2:08 pm
ဆရာနေမျိုးရေးတဲ့ မဝင်းမေ ကဗျာ စာအုပ်ကလေးဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့ ဆင်ခြင်စရာတွေတွေ့လာတဲ့ အပြင် ကဗျာဆရာရဲ့ အလွမ်းတွေပါရင်ထဲရောက်လာတယ်။
#6 by TeZaHlaing on August 3, 2011 - 6:42 am
ကို​ယ့် ​အသက်က ၃⁠၃ နှ​စ်။ညီ့ ​အသက်က ၂​၁။ဒါေ​ပ​မ​ယ့်ေ​နမျိုး​ရဲ့ကဗျာေ​တွ​ဖတ်ရ​ရင်မျက်ရည်ကျ​ရ​တာချ​င်း​တူ​တ​ယ်။အနု​ပညာ​ဟာ​အချိန်ကာ​လေ​တွ​ကို​ကျော်​လွ​န်ြ​ဖတ်သ​န်း​ပီး​ရှင်သန်သွာ​နိုင်တယ်။